ဂူထဲမှာ ပိတ်မိခဲ့တဲ့ ထိုင်းလူငယ်လေးတွေနဲ့ သူတို့အမှာစကားအချို့ – News – International News – Duwun
Tham Luang ဂူထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဂူအတွင်း ရေများဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် ပိတ်မိနေခဲ့ကြပါတယ်။
KJ 2018-07-09 06:11:32.0, 2018-07-09 06:11:32.0
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Tham Luang ဂူထဲမှာ ပိတ်မိပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ လူငယ်အုပ်စုကို ဇူလိုင် ၈ ရက်မှစပြီး ဂူအပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လေးဦးကို အောင်မြင်စွာ ကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်လေးတွေက ဘယ်သူတွေလဲ? သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လတ်တလော ပြောစကားနဲ့ ထူးခြားချက်အချို့ကို ကောက်နုတ်စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ၉ ဦးကိုလည်း ယနေ့ (ဇူလိုင် ၉ ရက်) မှာ ဂူအပြင်သို့ ဆက်လက်ကယ်ထုတ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယောက်ျားလေး ၁၂ ဦး (Photo: What's Treding PB Twitter)
ဂူထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းလူငယ်အုပ်စုကို ကယ်ထုတ်နိုင်ရေး နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံထက်မနည်းနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပူးပေါင်းကူညီခဲ့ကြသလို ဒီဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက စိတ်ဝင်တစား၊ စိုးရိမ်တကြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂူထဲမှာ ၉ ရက်ကြာ ပိတ်မိပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပေမဲ့ အသက်ရှင်လျက် ပြန်ရှာတွေ့ကာ ကယ်ထုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ထိုင်းလူငယ်လေးတွေက ဘယ်သူတွေလဲ? သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လတ်တလော ပြောစကားနဲ့ ထူးခြားချက်အချို့ကို ကောက်နုတ်စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
- Chanin Vibulrungruang (အသက် ၁၁ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Titan)
အသက် ၇ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဘောလုံးကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
- Panumas Sangdee (အသက် ၁၃ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Mig)
ရေတပ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေက ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်&apos; လို့ မိဘတွေထံ စာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
- Duganpet Promtep (အသက် ၁၃ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Dom)
Wild Boars ဘောလုံးအသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းကလပ်အသင်းအချို့က စောင့်ကြည်ခံရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
- Somepong Jaiwong (အသက် ၁၃ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Pong)
ထိုင်းနိုင်ငံ လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းမှာ ပါဝင်ကစားရန် အိမ်မက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
- Mongkol Booneiam (အသက် ၁၃ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Mark)
အလွန်လေးစားစရာကောင်းပြီး လိမ္မာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လို့ သူ့ရဲ့ဆရာတွေက ပြောကြပါတယ်။
- Nattawut Takamrong (အသက် ၁၄ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် Tern)
သူ့ကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ မိဘတွေထံ စာရေးသားပြောခဲ့ပါတယ်။
- Ekarat Wongsukchan (အသက် ၁၄ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Bew)
ဂူထဲကနေ ပြန်လွတ်မြောက်လာပြီးရင် အမေ့ဆိုင်မှာ ကူညီပါ့မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
- Adul Sam-on (အသက် ၁၄ နှစ်)
ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ဘောလီဘောပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယရခဲ့တဲ့ ဘောလုံးဘောအသင်းရဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
- Prajak Sutham (အသက် ၁၅ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Note)
စမတ်ကျပြီး တည်ငြိမ်အေးဆေးသူလို့ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြပါတယ်။
- Pipat Pho (အသက် ၁၅ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Nick)
ဂူထဲကနေ ပြန်ထွက်လာပြီးရင် သူ့ကို အကင်ဆိုင်မှာ လိုက်ကျွေးပါလို့ မိဘတွေထံ စာရေးမှာကြားခဲ့ပါတယ်။
- Pornchai Kamluang (အသက် ၁၆ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Tee)
&apos;မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်ပါတယ်&apos; လို့ မိဘတွေထံ စာရေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
- Peerapat Sompiangjai (အသက် ၁၇ နှစ်၊ နာမည်ပြောင် - Night)
ဂူထဲကို အုပ်စုလိုက် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်ဟာ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေက မွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးဖို့ စောင့်နေတယ်လို့ သူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။
- Ekapol Chantawong (အသက် ၂၅ နှစ်၊ လက်ထောက်နည်းပြ၊ နာမည်ပြောင် - Ake)
ဘောလုံးအသင်းသားတွေရဲ့ မိဘများထံ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ စာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေက သူ့ကို အပြစ်မတင်ပါဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။